Vaovao - Mety ho tsara tarehy tokoa ny firakotra rindrin'ny PVC!
Hatramin'ny andro taloha, ny fikatsahan'ny olombelona "hatsaran-tarehy" dia tsy nitsahatra. Tany am-piandohan'ny taonjato faha-12 hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-18 dia nanomboka nampiasa firakotra rindrina ho firavaka anatiny ny manan-kaja soedoa sy ny mpivarotra manan-karena. Ireo fomba ireo dia rakotra rindrina cashmere, rakotra rindrin'ny Gobelin, ary gilding. Sarona rindrina vita amin'ny rindrina, fonosana rindrina satin vita amin'ny volory, sns, hanehoana ny mombamomba azy ireo. Taty aoriana, nanjary nalaza teo amin'ireo sivily ny saron-drindrina simika (lamba vita amin'ny landihazo) ary nanjary romotra be.
Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia famokarana tsy mitsaha-mitombo, dia mitombo hatrany ny karazana fonony rindrina. Miaraka amin'ny fisorohana ny lelafo, ny toetran'ny bakteria, ny hodi-kazo, ny fanamainana tsy misy rano ary ny antifouling, ny firakotra rindrin'ny PVC dia mifanaraka kokoa amin'ny filan'ny tontolo isan-karazany ary mahafeno ny filan'ny olona maoderina. , izay tsy mitovy amin'ny fitaovana fandravahana rindrina hafa.
Na izany aza, misy olona miteny vazivazy fa ny firakofana rindrin'ny PVC dia tsy mety ho «lamaody lamaody» ho an'ny rindrina, satria ny fiheveran'ny besinimaro ny fisaronan'ny rindrina PVC dia ny maha-azo ampiharina azy.
1. Ny "tsy manam-paharoa" amin'ny firakotra rindrina PVC
Ny embossing telo-habe sy ny loko avo lenta novokarin'ny rindrina PVC dia tsy mitovy amin'ny firakotra sy rindrina vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba mahazatra. Ny rakotra rindrin'ny PVC dia azo ampifandraisina amin'ny lamina telo refy sy lamina maro loko mba hamoronana faritra fisaka. Ny vokany hita maso izay tsy azon'ny rindrina norakofana
Ny firakotra rindrina PVC dia mihodina amin'ny roller, izay afaka mampifangaro lamina samihafa, fitaovana samihafa ary loko samihafa. Raha ampitahaina amin'ny firakotra rindrina tokana izay tsy miova afa-tsy amin'ny lamina, ny firakotra rindrin'ny PVC dia afaka mamorona endrika sy endrika manankarena kokoa, ka hotely avo lenta no misafidy firakotra rindrina PVC ho fitaovana haingon-trano amin'ny rindrina.
2. Ny firakotra rindrina PVC dia afaka "mitazona ny fahatanorana mandrakizay"
Ny fahatsapana voalohany dia zava-dehibe, fa ny tena zava-dehibe dia ny fitazonana io "hatsarana" io. Amin'ny fotoana aorian'ny nahavitan'ny fananganana azy, maro ny firakofana rindrina no hanana olana toy ny fahanterana ara-nofo sy ny fiovan'ny volony. Raha ampitahaina amin'ny karazana rakotra rindrina hafa, saron-drindrina PVC, sarimihetsika misy kalandrie vita amin'ny PVC dia afaka mitazona tsara kokoa ny "tanora", na dia efa ela aza no nampiasaina dia mbola manana loko miloko sy loko mamirapiratra hatrany am-boalohany izy ireo. Izy io koa dia manana tombony amin'ny fanadiovana rano, antifouling ary fanadiovana rano
3. Ny firakotra rindrina PVC dia mety amin'ny scenario bebe kokoa
Hotely maro, toerana fialamboly, trano fisakafoanana, trano fisakafoanana ary tranobe misy birao no misafidy ny hampiasa rindrina PVC amin'ny haingon-trano ao anatiny. Ny mpandraharaha sasany aza dia mivarotra trano fonenana avo lenta, trano fonenana ary tranobe misy ny birao rehefa voaravaka amin'ny firakotra rindrina PVC.